သုတရသ Archives - Page2of 14 - MM Daily Life
နံနက် အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်နေစဉ် ကုသိုလ် ၅ မျိုး ကို ရအောင်ယူနည်း
July 6, 2021 by MM Daily Life
နံနက် အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်နေစဉ် ကုသိုလ် ၅ မျိုး ကို ရအောင်ယူနည်း ၁။ ဒါန ကုသိုလ် မနက်အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ဆိုရင် ရေဖလား ထဲကို ရေထည့် လိုက်ပါ။ မ်က္စိ နဲ့ မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်သို့ မမြှောက်လိုက် ပါနဲ့ မေတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ပါ။လက်ကကိုင် ထားတဲ့ ရေဖလားနဲ့ မြတ်စွာဘုရားအား မျက်နှာ သစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ ၏ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သော အားဖြင့် မျက်နှာ သစ်တော်မူ ပါဘုရား လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ၂။ ဗုဒ္ဓနုသာတိ ကုသိုလ် မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ အသုံးပြုနေပုံ … Read more
July 2, 2021 by MM Daily Life
အိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့အလုပ်ကြမ်းလုပ်ကာငွေရှာနေတဲ့ မိန်းကလေး မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အမျိုးကတော့ လှတပတနေသူတွေများပါတယ်။ ရုပ်ရည်ချောပါက အခွင့်ရေးကောင်းရနိုင်မည် နေရာတွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူတွေပါ။ မိန်းကလေးတွေက အမြဲလိုလို အလှပြင်နေကြသူတွေများပါတယ်။ မိမိတို့၏အလှတရားပျက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်သူတွေပါ။ အချို့မိန်းကလေးတွေဆိုလျှင် အလုပ်ကြမ်းပင်မလုပ်ကြပါ။ ယခုမိန်းကလေးကတော့ ထူးဆန်းပါတယ်။ သူက ရုပ်ရည်အလွန်ချောမောသူပါ။ သို့သော်သူက အလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်ကာ ၀င်ငွေရှာပါတယ်။ သူမအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ အလုပ်ကြမ်းလုပ်တာက အိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ တရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏နာမည်က ရှောင်မိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ယောကျာ်းသားတွေတန်းတူ အုတ်သယ်ဘာညာစတဲ့အလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်ပါတယ်။ သူမ၏အိပ်မက်ကတောါ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဝယ်နိုင်ဖို့ပါ။ သူမအနေဖြင့် အလုပ်ကြမ်းလုပ်နေရသော်လည်း ပျော်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိမျဝယျနိုငျဖို့အလုပျကွမျးလုပျကာငှရှောနတေဲ့ မိနျးကလေး မိနျးကလေးဆိုတဲ့ အမြိုးကတော့ လှတပတနသေူတှမြေားပါတယျ။ ရုပျရညျခြောပါက အခှငျ့ရေးကောငျးရနိုငျမညျ နရောတှမှော ဝငျရောကျလုပျကိုငျကွသူတှပေါ။ မိနျးကလေးတှကေ အမွဲလိုလို အလှပွငျနကွေသူတှမြေားပါတယျ။ မိမိတို့၏အလှတရားပကျြမှာကိုလညျးစိုးရိမျသူတှပေါ။ အခြို့မိနျးကလေးတှဆေိုလြှငျ အလုပျကွမျးပငျမလုပျကွပါ။ ယခုမိနျးကလေးကတော့ … Read more
မိသားစုတဈခုလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုကျရပွီးနောကျ ကိုယျ့ဘာသာစိုကျပြိုးလုပျကိုငျကာ တဈကိုယျတညျးရပျတညျနခေဲ့ရတဲ့ ကလေးငယျ(ရုပျသံ)
June 26, 2021 by MM Daily Life
မိသားစုတဈစုလုံးကို ဆုံးရှုံးပွီးနောကျ မှေးစားခွငျးကို ငွငျးဆနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈအရှယျကလေးငယျတဈဦးရဲ့ ကွကှေဲဖှယျသတငျးက ကမ်ဘာတဈဝှမျးရှိ သနျးပေါငျးမြားစှာသောသူတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို အရညျပြျောစခေဲ့ပါတယျ။ အခြို့သော အသကျ ၁၀ နှဈအရှယျလူငယျတှဟော စိုးရိမျစရာအကွောငျးမရှိဘဲ ကြောငျးကိုသှားကာ ကလေးဘဝကို ပြျောရှငျစှာခံစားနိုငျ သျောလညျး Dang Van Khuyen အမညျရှိ ၁၀နှဈအရှယျ ကောငျလေးဟာ သူ့ရဲ့နထေိုငျရာ ကြိုးနှံတဲ့အိမျလေးနဲ့ ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံရဲ့ ရှာတဈရှာရှိ လယျကှငျးမြားထဲမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စိုကျခငျးမြားနဲ့ အတူ နထေိုငျနခေဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဘဝက ကံမကောငျးခဲ့ပါဘူး။ ငယျငယျကတညျးက မိခငျကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီးဖခငျဖွဈသူက ဆောကျလုပျရေးအတှကျ အလုပျရှာရနျ ထှကျသှားစဉျမှာ အဘှား နဲ့ အတူနထေိုငျခဲ့ပွီး ဖခငျဖွဈသူက မတျောတဆဖွဈပှားမှုကွောငျ့ သဆေုံးသှားပွီးနောကျ Khuyen က ဘယျသူ့အကူအညီကိုမှ … Read more
သားသမီးတို့ကို ပုဇွန်လေးများ စားဖူးစေချင်သောကြောင့် မင်္ဂလာပွဲမှ အကျန်လေးများကို အိတ်ထဲထည့်သွားခဲ့သည့် ထီရောင်းသူအမျိုးသမီးတစ်ဦး
သားသမီးတို့ကို ပုဇှနျလေးမြား စားဖူးစခေငျြသောကွောငျ့ မင်ျဂလာပှဲမှ အကနျြလေးမြားကို အိတျထဲထညျ့သှားခဲ့သညျ့ ထီရောငျးသူအမြိုးသမီးတဈဦး မိဘတို့၏ သားသမီးတို့၏အပျေါတှငျ ထားရှိသော မတ်ေတာတရားမြားနှငျ့ ကြေးဇူးတရားသညျကား စာဖှဲ့၍မီနိုငျမညျမဟုတျပေ။မွငျ့မိုရျတောငျပငျလြှငျ မိဘတို့၏ကြေးဇူးတရားနှငျ့ယှငျလြှငျ နှမျးစမြေှ့ပငျရှိတော့သညျ မဟုတျပါလား။ယခုတှငျလညျး မိခငျထီသညျကွီးတဈဦး၏ သားသမီးလေးတို့အတှကျ ကွိုးပမျးပေးခဲ့မှုသညျ လူတိုငျး၏ နှလုံးသားကို မကျြရညျကစြခေဲ့ရပါတယျ။ မိခငျဖွဈသူဟာ သားသမီးလေးတို့ကို ပုဇှနျလေးမြားကို ဝယျကြှေးခငျြသျောလညျး ငှကွေေးမတတျနိုငျသောကွောငျ့ မင်ျဂလာပှဲတဈခုထံမှ အကနျြလေးမြားကို သှားရောကျတောငျးယူခဲ့ပါတယျ။ထိုသို့တောငျးယူရာတှငျလညျး မိခငျဖွဈသူသာ လောဘကွီးစှာ ယူသှားခဲ့ခွငျးမြိုးမဟုတျဘဲ သားသမီးတို့စားရနျ အနညျးငယျသာ ယူသှားခဲ့ပါတယျ။ ယူဆောငျပွီးခြိနျတှငျ အမြိုးသမီး၏ မကျြနှာဟာ အလှနျပြျောနပေုံရပွီး သားသမီးတို့ကို ကြှေးရတော့မညျဖွဈသောကွောငျ့ ပီတိဖွဈနပေုံရပါတယျ။ Shoon (Cele Daily) zawgyi သားသမီးတို့ကို ပုဇွန်လေးများ စားဖူးစေချင်သောကြောင့် မင်္ဂလာပွဲမှ အကျန်လေးများကို … Read more
ကိုဗဈ ကူးစကျခံရပွီး ကူညီမဲ့သူမရှိတာကွောငျ့ လိုအပျတာတှကေိုယျတိုငျပွငျဆငျကာ Q ဝငျနကွေရှာတဲ့ ညီအဈကိုနှဈယောကျ
June 24, 2021 by MM Daily Life
လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေမှော ပွညျတှငျးရေးတှေ မငွိမျသကျသေးတဲ့အပွငျ Covid 19 ကူးစကျခံရမှုတှကေလညျး တဈစတဈစ မွငျ့တကျလာပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဖွဈပှားကူးစကျမှု မွနျဆနျလှနျးတဲ့ ဗီဇပွောငျးကိုဗဈရောဂါဟာ ပွညျပနိုငျငံတှမှော ဆိုးရှားနသေလို လတျတလောမှာ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရောကျရှိကာ သဆေုံးလူနာတှလေညျး မြားပွားလာနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဗီဇပွောငျး Covid 19 ဟာ ကလေးမွို့အပွငျ အခွားမွို့နယျတှအေသီးသီးမှာလညျး ပွနျ့ပှားနသေလို မိသားစုတှတေျောတျောမြားမြား ဒုက်ခအခကျအခဲတှဖွေဈနကွေရပွီး အခုတဈခါမှာလညျး ရောဂါကူးစကျခံရတဲ့ ကလေးငယျညီအဈကိုနှဈယောကျကလညျး Q ဝငျဖို့အတှကျ ကိုယျထူကိုယျထပွငျဆငျခဲ့ကွရပါတယျ။ Covid 19 ကူးစကျခံရတဲ့ တိုငျးရငျးသား ကလေးငယျ ညီအဈကိုနှဈယောကျရဲ့ မိဘနှဈပါးစလုံးလညျး ကူးစကျခံထားရတာမို့ အနားမှာ ရှိမနနေိုငျသလို ကူညီမယျ့သူလညျး မရှိတာကွောငျ့ ညီအဈကိုနှဈယောကျ လိုအပျတာတှကေိုယျတိုငျပွငျဆငျကာ Q ဝငျနကွေရှာတာ ဖွဈပါတယျ။ … Read more
အမေရိကန် ချွေးမနဲ့ ဗမာချွေးမ ဘာကွာလဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ
June 20, 2021 by MM Daily Life
အမေရိကားမှာ ကျောင်းသွားတက်ခဲ့တဲ့သား ကျောင်းပြီးတော့ ကျွန်မအတွက် စူစန်လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ချွေးမတစ်ယောက် ရှာပေးခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့မှာ မြေးလေးထော်ဘီတောင် (၃)နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ သားက ကျွန်မကို အမေရိကားအလည်လာဖို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ အမေရိကားမှာနေခဲ့တဲ့ (၃)လအတွင်း ချွေးမစူစန်ရဲ့ သားသမီးကို ဆုံးမသွန်သင်နည်းတွေက ကျွန်မကို အတွေးအမြင် ပိုကျယ်စေခဲ့ပါတယ်။ (၁) မစားရင် အဆာခံပါ မနက်တိုင်း ထော်ဘီအိပ်ရာထလာတာနဲ့ စူစန်က မနက်စာကို စားပွဲပေါ်တင်ပေးခဲ့ပြီး သူ့အလုပ်ကို သူဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။ ထော်ဘီဟာ ကိုယ်တိုင် ကုလားထိုင်ပေါ်တက်၊ ကိုယ်တိုင်နွားနို့သောက်၊ ကိုယ်တိုင်ပေါင်မုန့်တွေ စားနေခဲ့တယ်။ စားပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်အခန်းထဲဝင်ပြီး အဝတ်ဘီရိုထဲကနေ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်။ (၃)နှစ်ပဲရှိတဲ့ ထော်ဘီလေးဟာ ခြေအိတ်ရဲ့အရှေ့အနောက်၊ ဘယ်ဖိနပ်၊ ညာဖိနပ်ကို ခွဲတတ်သေးသူ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါက ထော်ဘီဟာ ဘောင်းဘီကို … Read more
June 18, 2021 by MM Daily Life
လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်သန် ရပ်တည် ဖို့ရာ ပညာတတ်ဖို့၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့၊ ထက်မြက်ဖို့ စတဲ့ အချက်တွေ လိုအပ် တယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း အလိုအပ်ဆုံး အချက်ကတော့ စိတ်ကောင်းရှိ ဖို့ပါနော် ။ စိတ်ကောင်းရှိ ဖို့ဆိုတာ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်ပါ တယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတ်ကောင်းစိတ်တယ် ဆိုတာ ဟန်ဆောင်လို့ မရလို့ ပါပဲ ။ စိတ်ကောင်းရှိသူတွေမှာ တွေရတဲ့ အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်မယ်နော် ။ (1) ရိုးသားတယ် စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတိုင်းအပေါ်မှာ ရိုးသားတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ရင်းအတိုင်း ဆက်ဆံ တတ်တယ်။ ဟန်မဆောင် တတ်ဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှေ့မှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ … Read more
ဆံပင်အုံထူထူထဲထဲနဲ့ အရှည်မြန်ချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
ဆံပင်အုံထူထူထဲထဲနဲ့ အရှည်မြန်ချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆံပင်အရှည်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆံပင်က ၅.၆၂၇ မီတာ ရှည်လျားပါတယ်။ ဆံပင်နည်းနည်းလေးရှည်လာတာနဲ့ အမျှ ဂရုစိုက်မှုကလည်း ပိုများလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ပျိုမေလေးတွေကျတော့ ဆံပင်အုံပါးလို့ ဆံပင်အရှည်နှေးလို့ စိတ်ညစ်ကြရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွကို လိုက်နာပြီး သေချာဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ဆံပင်က နဂိုကထက် ပိုရှည်လာပြီး အုံပိုထူလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပါ ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဆံပင်မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေဆီသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေပါတယ်။ ထိုမှတဆင့် ဆံပင်အရှည်မြန်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်နေစဉ် အချိန်အတွင်းမှာလည်း ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဆံပင်အခြောက်ခံတဲ့အခါ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ခြောက်အောင် သုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ် ခေါင်းလျှော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဆံပင်ကို လိမ်ခြင်း၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပွတ်တိုက်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ ပုဝါလေးနဲ့ ညင်ညင်သာသာလေး ဖိပေးပြီး စိုနေတဲ့ရေတွေကို … Read more
သင်ဟာ အမြဲတမ်း single ဖြစ်နေပေမယ့် သင်ဘာ့ကြောင့် single တစ်ယောက် ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာ သေချာမသိဘူးလား ကောင်းပါပြီ။ အမြဲတမ်း single ဖြစ်နေသူတစ်ယောက်မှာ အများအားဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စရိုက် ၁၀ချက်ရှိပါတယ် ၁ Rs အကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဒိတ်တဲ့အဆင့်သာ ရှိခဲ့ရင်တောင် သူငယ်ချင်းတွေက အချစ်ရေးအကြံပေးချက်အတွက် သင့်ဆီသာ လာတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်သင်ဟာ အမြဲတမ်း ကြားနေ အနေအထားမှာ ရှိနေတာကြောင့် သင့်အကြံပေးချက်က တစ်နည်းနည်းနဲ့ အမြဲတမ်း အလုပ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ၂ သင်ကြိုက်နေတဲ့သူဆီမှာ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိလို့ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ထဲကနေအသေ crush နေနိုင်ပေမယ့် သူ သူမကို တကယ့်ဘဝမှာ မြင်တွေ့တဲ့အခါ သင်ဟာ ဝေးဝေးရှောင်နေတာမျိုး၊ ခပ်တန်းတန်းနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သူတို့ကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမယ်ဆိုတာ … Read more
ရုပျလေးပဲခဈြဖို့ကောငျးနလေို့မပွီးပါဘူး.. စကားပွောဆိုရာတှငျလညျး ခဈြစရာကောငျးအောငျပွောတတျရပါတယျ။ယောကျကြားမြားအသုံးပွုမညျဆိုပါက တဈခြို့နညျးမြားကိုသာအသုံးခရြနျ (အကုနျသုံးရငျ Gay သှားနိုငျ) 1.နျော… စကားပွောဆိုရာတှငျ “နျော” ဟုထညျ့သှငျးပွောဆိုခွငျးကစကားကိုနူးညံ့သှားစပေါတယျ။ ခိုငျးစသေညျ့အရာမြား/ပူဆာသညျ့အရာမြားတှငျ နျောဟုအသုံးပွုခွငျးကသငျ့တျောပါတယျ။(ကိုကိုနျော / ကလေးကလညျးနျော) ဟုခြှဲနိုငျ 2.ဗြာ / ရှငျသုံးပါ ကြှနျတျောခြောပါတယျဟုပွောမညျ့အစား/ ကြှနျတျောခြောပါတယျဗြာဟု ပွောခွငျးက ပိုခဈြစရာကောငျးပါသညျ။ 3.လေးဟုသုံးပါ.. လူတဈယောကရြဲ့နာမညအြပှညြ့အစုံခေါာမညြ့အစား ကြျောကွီးလေးဟု ခေါာလိုကခြှငြးက ကွားရသူအဖို့ရငျခုနျနှုနျးပါမွငျ့မားစပေါတယျ။ ရိုငျးစိုငျးစှာဆဲရငျတောငျ လေးဟုထညျ့ဆဲခွငျးကခဈြစရာကောငျးစပေါတယျ။ (e.g-နငျ့ဂြီးတျောလေး) 4.လကျကိုငျစကားပွောခွငျး… နားထောငျနသေူရဲ့လကျလေးကိုကိုငျထားပွီးစကားပွောပါ။ဒီနညျးလေးကိုတော့ ကိုယျခဈြရတယျ့သူတှနေဲ့စကားပွောတယျ့အခါမှာသုံးပါ။ အားပေးစကားပွောတယျ့အခါမြိုးတှငျအသုံးပွုခွငျးကပိုသငျ့တျောပါတယျ။(ရညျးစားစကားပွောသညျ့အခါမြားတှငျအခွအေနကွေညျ့လကျကိုငျ၍ပွောနိုငျ) 5.ဟုတျ+ခေါငျးညိမျ့. ဟုတျတဈလုံးထဲပွောမညျ့အစား ခေါငျးလေးညိမျ့ကာဟုတျဟုပွောခွငျးကပို၍ခဈြစရာကောငျးစပေါတယျ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဟုသုံခွငျးကပိုကောငျးပါတယျ။ (အဖွပေေးသညျ့အခါမြားတှငျလညျးခဈြတယျဟုပွောပွီးခေါငျးလေးညိမျ့ပွတာပိုပွီးရငျခုနျရပါတယျ။) ဒီ5ခကျြလောကျသိပွီဆိုလြှငျ စကားပွောလိုကျတာနဲ့ သငျ့ကိုခဈြသှားစမှောဖွဈပါတယျ။ ခြီးကြူးခွငျးမြားကိုလညျးရရှိနိုငျသလို လိုခငျြတာမြားကိုလညျးပူဆာနိုငျပါတယျ။ စာဖတျသူလေးမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ.. ကိုယျစကားပွောတယျ့အခါ ဒီ5ခကျြထဲက တဈခကျြမှမပါရငျတျောတျောကွမျးနပေါပွီ။..? ခဈြစရာကောငျးအောငျတဈခှနျးလောကျအစမျးပွော … Read more